वि.सं. २०७५ वैशाख ०९ गते आईतबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अप्रिल २२ तारिखको राशिफल हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > वि.सं. २०७५ वैशाख ०९ गते आईतबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अप्रिल २२ तारिखको राशिफल हेर्नुहोस
भोलि कुनै नयाँ कार्य सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने भोलिनै सुरु गर्नुहोस् किन कि भोलिको समय तपाईंको लागि निकैनै अनुकुल छ। भोलि सरकारी लाभ हुने पनि सम्भावना देखिन्छ। व्यापार व्यावसायमा पनि निकै लाभ हुने योग छ। तपाईंको बिचारमा पनि छिट्टै परिवर्तन आउनेछ ।
भोलिको दिन तपाईंको लागि मध्यम फलदायी छ। भोलि साथी भाईसँगको भेटबाट तपाईंको मन प्रशन्न रहने छ। भोलिको दिनको धेरै समय धन सम्बंधित योजना बनाउनमा नै बित्नेछ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट भोलिको दिन निकै लाभदायी रहनेछ। भोलि तपाईंले निकै मिठो भोजन र कपडाको पनि सुविधा भोलि प्राप्त गर्नु हुने देखिन्छ। मनमा कुनै पनि प्रकारको नराम्रो बिचारहरु आउन न दिनु होला। व्यापार र व्यवसायमा अनुकूल भएको देखेर मन प्रशन्न रहनेछ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट लाभदायी दिन छ तर आर्थिक दृष्टिकोणबाट भोलि आयको तुलनामा खर्च धेरै हुनेछ। आँखाहरु दुख्ने सम्भावना देखिन्छ। अरु व्यक्तिसँग झै झगडा नहोस् भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नुहोला। पारिवारिक वातावरण राम्रो रहनेछ।
सामाजिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा आनंद र लाभदाएक समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ। साथीहरुबाट पनि शुभ समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ। आयमा वृद्धि हुनेछ र धनलाभ हुने देखिन्छ। मानसिक चिंता हुन सक्छ। परिवार र बच्चाहरुसंग मनमुटाव हुने घटना पनि हुन सक्छ।
भोलि तपाईंको दिन अनुकूल रहनेछ। परिवारसँगको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। साथीभाइहरुबाट उपहार पाउने देखिन्छ। काममा पनि तपाईं देखि सबै प्रसन्न रहनेछन्। कुनै सुन्दर ठाउमा घुम्न जाने योग छ। साथीहरूबाट लाभ हुनेछ।
भोलिको दिन शारीरिकरूप देखिनै आलस्य रहने देखिन्छ। बच्चाहरुसंग पनि मनमुटाब हुन सक्छ तर मध्याह्न पछि कार्यालयको वातावरणमा भने सुधार हुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा पनि मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ।
भोलि तपाईं शारीरिक र मानसिक रूप देखि नै अस्वस्थ हुनु हुने देखिन्छ। मानहानि हुने योग भएको कारण आफ्नो मानको पनि ध्यान राख्नुहोला । आवाजमा सहनशीलताले स्थिति अनुकूल बनाउनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा आपत्ति रहन सक्छ।
पारिवारिक वातावरण सुखद हुनेछ। तपाईं शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ हुनुहुनेछ, मध्य दिन पछि तपाईंको दिमागमा नकरात्मक सोच आउनुको कारण टाउको भारी भएको महसुस गर्नुहुनेछ। रिसको मात्रा बढ्न सक्छ, त्यसैले ध्यान दिनु होला ।
परिवारमा खुशी र शान्ति रहनेछ। सम्मान पाउने सम्भावना देखिन्छ। आर्थिक लाभ हुनेछ। मध्य दिन पछी, तपाईंको साथी र परिवारसँग सावधान पुर्बक रहनुहोला। मनको आनन्द प्राप्त गरेर दिमाग आनन्दित हुनेछ।
भोलि तपाईंको विशेष रुचि कला तिर हुने देखिन्छ। भोलि खर्च उच्च हुनेछ। बच्चा सम्बन्धित प्रश्नहरूले सताउनेछन्। अपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछ। आर्थिक लाभ हुनेछ। तपाईंले व्यवसायमा कर्मचारीहरूबाट सहयोग पाउनुहुनेछ।
अत्यधिक सोचको कारण मानसिक विकारको अनुभव गर्नुहुनेछ। पेटमा समस्याहरु आउने देखिन्छ। भोलि विद्यार्थीहरूको लागि लाभदायक दिन हो। भोलिको समय यात्राको लागि उपयुक्त छैन। मान्-सम्मानमा ध्यान दिनुहोला ।
नागढुङ्गास्थित चेकप्वाइन्टमा जब एक युवतीलाई प्रहरीले चेक गर्दा प्रहरी नै चकित !
धामीको लहलहैमा अढाई वर्षीय बालकको बलि, पुरा रहस्य खुल्दा प्रहरीनै परे तिनछक्क !
राजतन्त्र र गणनन्त्र बीच दोहोरो भिडन्त, झन्डै कुटाकुट -भिडियो